सुनिता भन्छिन् -बरु लोग्ने त्याग्छु, हिन्दु धर्म त्याग्दिँन ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/सुनिता भन्छिन् -बरु लोग्ने त्याग्छु, हिन्दु धर्म त्याग्दिँन !
सुनिता भन्छिन् -बरु लोग्ने त्याग्छु, हिन्दु धर्म त्याग्दिँन !
अहिले अर्थमन्त्री के कुरा गर्दै हिँड्नुभएको छ भने अब त साधारण खर्च चलाउने पैसा छैन। राजश्व छैन भनेर उहाँ विलाप गरिरहनुभएको छ,’ महतले थपे, ‘कस्तो खाले विरोधाभाषसपूर्ण कुरा हो?
भर्खरै उपत्यकाबाट आयो फेरी दु’खद ख’बर ! सबैलाई सतर्क रहन आग्रह !